Nohamafisin’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jeneraly Béni Xavier Rasolofoniriana fa tsy azo hanaovana amboletra ny faritra mena sy ny faritra voahodidina saina. Tafiditra ao anatin’izany ny toby miaramila, ny banky foiben’i Madagasikara, ny toerana fanapahan-kevitra …Tohiny
Diabe ho eny Iavoloha : Tsy manaiky hatao sorona intsony ny olona
Nihemotra tamin’ny ora farany ireo depiote miisa 73 raha nikasa ny hitondra olona ho eny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha androany. Tsy nahomby mantsy ny fitaomana olona, hany ka mihena am-pitoerana toa fen’antitra ireo olona mankeny an-kianja. …Tohiny
Manoloana ny toe-draharaha mafampana miseho eto amin’ny firenena amin’izao fotoana izao, di naneho hevitra ihany koa ny Masoivoho Alema, Harald Gerhig ka nilaza fa tsy manaiky ny fanonganam-panjakana izay kasaina ataon’ireo depiote ho an’ny fanovana …Tohiny
Fandrobana zandary teny 67Ha : Lasa ny basy
Naiditra am-ponja vonjimaika ireo telo lahy nikotrika ny fandrobana tamin’ny tranona zandary, rehefa avy nalaina am-bavany teny anivon’ny fampanoavana. Ny lehilahy iray moa no voalaza fa tompon’antoka tamin’ny fandrobana, izay narahan’ny fanampian’ireo roa namany iray …Tohiny